Opioids: NATHI ubani Heroin Ingxaki ziphakathi - iklasi EHLABATHINI - Ividiyo incoko yeHlabathi
Opioids: NATHI ubani Heroin Ingxaki ziphakathi - iklasi EHLABATHINI
A njengokuba umthetho, ilungelo epidemic
Ukususela uya-iminyaka e-USA, revealing olomeleleyo intlungu-baba kuchaziweA senzo ukuba kuthatha revenge ngoku: Ezininzi Americans kuba slipped ngokusebenzisa Opioid-equlethe medium kwi-Heroin. Inani addicts ukuchongeka, ukuba sele ngaphezu kwesiqingatha a Million Americans addicted kwi-heroin.
Malunga wafa ka-Overdoses.
Ngokungafaniyo elidlulileyo namhlanje, ingakumbi mhlophe abantu ukusuka kwiindawo zasemaphandleni oluphakathi udidi oluphakathi, resort ukuba lomgaqo-drug. Impilo igunya CDC (Centers kuba Isifo Ulawulo nothintelo) uqikelelo ukuba u-million Americans baba Opioid-equlethe medications. I-prescriptions ka-painkillers kuba ukususela tripled. Ngaphezu Abantu wafa ka-Overdoses - kane njengoko abaninzi indlela. Ngexesha elinye, ingcaphephe, nabasemagunyeni khangela lezempilo ukuba iqela drug abasebenzisi kweli lizwe."Lento leqela le epidemic kunye akukho elula izisombululo,"utshilo Caleb Alexander, Co-Umlawuli we-Johns Hopkins Umbindi kuba drug ukhuseleko. Ngenxa yokuba Unxulumano phakathi intlungu reliever misuse kwaye Heroin ingaba ngokusondeleleneyo. Yintoni akukho nimangaliswe, ngenxa yokuba omabini ingaba chemically kakhulu ngokufanayo oluhleliweyo opioids, apho umthetho kwi-ingqondo kwi efanayo receptors. I-nzulu ngalo Ngezifundo ka-comment ingxwaba sichaza ukutshintsha ubuso Heroin gwenxa kweziyobisi: Kwi-uya-eminyaka, kwaba ulutsha ikakhulu abantu bonke imigca enqamlezeneyo imibala, iphatha, kunye umndilili, iminyaka kwi-Heroin njengoko ungeniso inqanaba Opioid.
Ngoku, nangona kunjalo, kwakukho iindawo, ingakumbi mhlophe amadoda nabafazi zabo phambi kwexesha twenties kwaye ukususela ngaphantsi engaselunxwemeni, ubhala ye-Neuro-pharmacologist Theodore Cicero.
Kwaye: Ezintathu -kwiimbombo zone kwabo kokuba slipped Addiction kwi prescription-kuphela iziyobisi, ezifana oxycodone okanye hydrocodone ngu kwi-Opioid. Oku olomeleleyo amayeza, phantse exclusively emva imisebenzi okanye cancer ngu yanikezela, ukuba ichaziwe kwi-free ngokukhawuleza. Abanye, ngexa, ibonakalisa uphando zaziswe engafikanga enikezwa ubungqina ukuba umngcipheko addiction ayikho kangaka. Kuphela emva ukubonelelwa iintsapho nabahlobo ye-Sufferers waya ukuba intlungu pills kwaye U.S. bonke ipesenti ye zithengiswe kwihlabathi liphela Opioid consumed kwi-medium, waba ukuze sikwazi ukuva addiction ingxaki.
I-nzulu ngalo comment ingxwaba Ngezifundo (St
Emva koko, ukufikelela nokulawulwa kwamayeza namachiza inzima ngakumbi kwaye amaxabiso yenyuka. Kanjalo, recipes baba itshintshile, ngoko ke ukuba zezikhumbuzo bengengabo dissolving kwi-styrene ngokulinganayo! kwakukho - senzo ukuba ukuchongeka ifuthe lomgaqo -*. Nangona kunjalo, ixabiso kwafuneka kuvuka, ukususela eba ngaphezulu kwaye ngaphezulu Dependent kwi-Heroin kufuna, kungenxa yokuba, ingakumbi ukususela Emexico, amaxesha amaninzi yinto cheaper ukubeka kwiindawo zentengiso. Inxalenye,"esifutshane"kuba ngaphantsi a US Dollar. Ngoseptemba i had U.S Isebe lezempilo, abameli bonke States of the United States wamngenisa ukuba lokucebisa kunye kwi ngcono zokuthintela kunye unyango ka-Opioid gwenxa kwaye Overdoses."Opioid mbhodamo uyayazi yonke imida. Yena meets ubomi kwi-izixeko, ezisemaphandleni kwaye suburban neighborhoods kulo lonke ilizwe,"watsho Umphathiswa impilo, Sylvia Burrell Kwintlanganiso waza wamxelela zabo encounter kunye umfana Dependent."Yena ke omkhulu kubekho inkqubela, waba ka-intlungu amayeza-dependent, emva kokuba yakhe ubulumko amazinyo ithathwe ngaphandle, kwaye ke ndabona ukuba Heroin waba cheaper."Abaninzi Opioid Addicts get akukho therapy. Ke ngoko, Obama ifuna ukwenza lula-karhulumente, phakathi kwezinye izinto, ukufikelela amayeza ngokuba naloxone, apho igcina ubomi kwimeko Overdose kwimeko kaxakeka, ukusetyenziswa, kwaye kunye, yezigidi KUTHI dollazi (malunga nama, izigidi Euro) inkxaso. Kwinto yonke, uhlahlo-lwabiwo-mali sicwangciso sibonelela kuba izigidi dollazi kuba unyango nothintelo ka-Opioid kakubi."Le yindlela elungileyo ukuva, kodwa kubalulekile hayi kwanele,"utshilo Caleb Alexander."Ndiza koyika siza kubona akukho landula kule epidemic ka-addiction, kude kube ukuthengisa i-massively yapapashwa iziyobisi amanani ebolekiweyo ngomhla landula. Le ingu elide indlela khona."Ingcaphephe bizani stricter prescribing guidelines, ngcono unyango kwaye ngaphezulu yokwazisa kwi-kagqirha ke uqeqesho."Lam Kwisizukulwana owakhe weva kwi-nzulu le eziyingozi ngenxa opioids nto.
Sino overestimated Ukusetyenziswa imibala kunye enxulumene iingozi massively underestimated."Ukususela uya-iminyaka e-USA, revealing olomeleleyo intlungu-baba kuchaziwe.
A senzo ukuba kuthatha revenge ngoku: Ezininzi Americans kuba slipped ngokusebenzisa Opioid-equlethe medium kwi-Heroin. Inani addicts ukuchongeka, ukuba sele ngaphezu kwesiqingatha a Million Americans addicted kwi-heroin. Malunga wafa ka-Overdoses.
Ngokungafaniyo elidlulileyo namhlanje, ingakumbi mhlophe abantu ukusuka kwiindawo zasemaphandleni oluphakathi udidi oluphakathi, resort ukuba lomgaqo-drug.
Impilo igunya CDC (Centers kuba Isifo Ulawulo nothintelo) uqikelelo ukuba u-million Americans baba Opioid-equlethe medications. I-prescriptions ka-painkillers kuba ukususela tripled. Ngaphezu Abantu wafa ka-Overdoses - kane njengokuba abaninzi. Ngexesha elinye, ingcaphephe, nabasemagunyeni khangela lezempilo ukuba iqela drug abasebenzisi kweli lizwe."Lento leqela le epidemic kunye akukho elula izisombululo,"utshilo Caleb Alexander, Co-Umlawuli we-Johns Hopkins Umbindi kuba drug ukhuseleko. Ngenxa yokuba Unxulumano phakathi intlungu reliever misuse kwaye Heroin ingaba ngokusondeleleneyo. Yintoni akukho nimangaliswe, ngenxa yokuba omabini ingaba chemically kakhulu ngokufanayo oluhleliweyo opioids, apho umthetho kwi-ingqondo kwi efanayo receptors. Louis) sichaza ukutshintsha ubuso Heroin gwenxa kweziyobisi: Kwi-uya-eminyaka, kwaba ulutsha ikakhulu abantu bonke imigca enqamlezeneyo imibala, ngokwe-avareji Iminyaka benawo ukuba Heroin njengoko ungeniso inqanaba Opioid. Ngoku, nangona kunjalo, kwakukho iindawo, ingakumbi mhlophe amadoda nabafazi zabo phambi kwexesha twenties kwaye ukususela ngaphantsi engaselunxwemeni, ubhala ye-Neuro-pharmacologist Theodore Cicero. Kwaye: Ezintathu -kwiimbombo zone kwabo kokuba slipped Addiction kwi prescription-kuphela iziyobisi, ezifana oxycodone okanye hydrocodone ngu kwi-Opioid. Ezi olomeleleyo iziyobisi, phantse exclusively emva imisebenzi okanye cancer ngu yanikezela, ukuba ichaziwe kwi-free ngokukhawuleza. Abanye, ngexa, ibonakalisa uphando zaziswe engafikanga enikezwa ubungqina ukuba umngcipheko addiction ayikho kangaka. Kuphela emva ukubonelelwa iintsapho nabahlobo ye-Sufferers waya ukuba intlungu pills kwaye U.S. bonke ipesenti ye zithengiswe kwihlabathi liphela Opioid consumed kwi-medium, waba ukuze sikwazi ukuva addiction ingxaki. Emva koko, ukufikelela nokulawulwa kwamayeza namachiza inzima ngakumbi kwaye amaxabiso yenyuka. Kanjalo, recipes baba itshintshile, ngoko ke ukuba zezikhumbuzo bengengabo dissolving kwi-injection molding ukuba abe ngokulinganayo! ayikwazi - senzo ukuba ukuchongeka ifuthe lomgaqo -*. Nangona kunjalo, ixabiso kwafuneka kuvuka, ukususela eba ngaphezulu kwaye ngaphezulu Dependent kwi-Heroin kufuna, kungenxa yokuba, ingakumbi ukususela Emexico, amaxesha amaninzi yinto cheaper ukubeka kwiindawo zentengiso. Inxalenye,"esifutshane"kuba ngaphantsi a US Dollar. Ngoseptemba, U.S Isebe lezempilo, abameli bonke Federal States bebe azisa kunye, ukuba udibane kunye kwi ngcono zokuthintela kunye unyango ka-Opioid gwenxa kwaye Overdoses."Opioid mbhodamo uyayazi yonke imida. Yena meets ubomi kwi-izixeko, ezisemaphandleni kwaye suburban neighborhoods kulo lonke ilizwe,"watsho Umphathiswa impilo, Sylvia Burrell Kwintlanganiso waza wamxelela zabo encounter kunye umfana Dependent."Yena ke omkhulu kubekho inkqubela, waba ka-intlungu amayeza-dependent, emva kokuba yakhe ubulumko amazinyo ithathwe ngaphandle, kwaye ke ndabona ukuba Heroin waba cheaper."Abaninzi Opioid Addicts get akukho therapy. Ke ngoko, ukuze kuphunyezwe Obama nolawulo, phakathi kwezinye izinto, ukufikelela amayeza ngokuba naloxone, apho igcina ubomi kwimeko Overdose kwimeko kaxakeka, ukusetyenziswa, kwaye kunye, yezigidi KUTHI dollazi (malunga nama, izigidi Euro) inkxaso. Kwinto yonke, uhlahlo-lwabiwo-mali sicwangciso sibonelela kuba izigidi dollazi kuba unyango nothintelo ka-Opioid kakubi."Ukuba ke kulungile ukuva, kodwa kubalulekile hayi kwanele,"utshilo Caleb Alexander."Ndiza koyika siza kubona akukho landula kule epidemic ka-addiction, kude kube ukuthengisa i-massively yapapashwa iziyobisi amanani ebolekiweyo ngomhla landula. Le ingu elide indlela khona."Ingcaphephe bizani stricter prescribing guidelines, ngcono unyango kwaye ngaphezulu yokwazisa kwi-kagqirha ke uqeqesho."Lam Kwisizukulwana owakhe weva kwi-nzulu le eziyingozi ngenxa opioids nto. Sino overestimated Ukusetyenziswa imibala kunye enxulumene iingozi massively underestimated.".
тиркеме чат рулетка
ukuhlangabezana ubhaliso ividiyo incoko Dating dating-intanethi Dating for free ngaphandle ubhaliso kunye iifoto videos esisicwangciso-mibuzo roulette ngaphandle ubhaliso free incoko ividiyo Dating omdala Dating ubhaliso Chatroulette ubudala esisicwangciso-mibuzo roulette ne-girls free omdala Dating